Janaayo | 2015 | WEEJIDOW
Archive for Janaayo, 2015
DAAWO: HEESTA LIXDA GOBOL EE KOONFUR GALBEED SOOMAALIYA
Janaayo 31, 2015
WAAJIDPRESS – 1 Feb 2015:
WAR DEG DEG AH: -Gudoomiye Ku Xigeenkii Degmada Buurdhuubo oo Goordhaw La Dilay
Wararka ka imaanaya Degmada Buurdhuubo ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in halkaa lagu dilay Gudoomiye Kuxigeenkii Degmada Buurdhuubo ee Gobolka Gedo Cali Mataan.
Gudoomiye Cali Mataan ayaa la sheegay in uu ku dhintay Iska horimaad dhex maray Ciidamo ilaalo u ah iyo kuwo kale oo kamid ah DF islamarkaana ku sugnaa Barkoontorool oo Degmada ku taala.
Wararka ayaa sheegaya in Gudoomiye Cali Mataan uu doonayay in uu meesha ka qaado Isbaaro ay dhigteen Koox Hubeysan oo Dharka Ciidamada Milatariga,iyadoona Wararka qaar ay sheegayaan in ay yihiin Ciidamo milatari ah.
Sheikh Isxaaq Xuseen Mursal oo kamid ah Mas’uuliyiinta Ahlusunna ayaa warbaahinta u Xaqiijiyay Dilka Gudoomiye Kuxigeenka,waxaana uu Tilmaamay in ilaa kor
War Deg Deg Ah: Baarlamaanka Soomaaliya oo Aqbalay Dalabkii Ra’iisal Wasaare Cumar C/rashiid
WAAJIDPRESS- 1 Feb 2015:
breaking16Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta 10 maalin oo kale siiyay Ra’iisal Wasaaraha si uu Wasiirro cusub ugu kordhiyo Xukuumadda uu dhawaan soo dhisay oo ka koobneyd 20 Wasiir.
Baarlamaanka oo maanta kulan yeeshay ayaa Ra’iisal Wasaaraha wuxuu ka codsaday muddo kordhin, si uu u magacaabo 5 Wasiir oo kale.
Xildhibaanno gaaraya 139 mudane ayaa oggolaaday codsiga Ra’iisal Wasaaraha, 47 way diidday, afar xildhibaanna way ka aamustay.
Kulanka oo uu shir-guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan ayaa waxaa ka qeyb gashay 230 xildhibaan.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa 17-kii Janaayo, 2015 ka noqday Wasiirro uu magacaabay 12-kii Janaayo, Baarlamaanka ayaana ka oggolaaday 14 cisho oo markaas uu ka codsaday si uu xukuumad cusub u dhiso.
War deg deg ah: Baarlamaanka oo Buuq ka bilowdey iyo ciidamada ilaalada oo Gudaha u soo galey xarunta
WAAJIDPRESS – 31 Jan 2015:
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ,ayaa si rasmi ah u furay kulanka ay goob joog ka yihiin in kabadan 200-Xildhibaan , waxaana kulanka xaadir ku ah Ra’izul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya.
Ra’iisal Wasaaraha oo khudbad u jeediyay Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, ayaa wuxuu ka codsaday in fursad loo siiyo 10 maalmood oo kale, si uu ugu soo dhameystiro Golahiisa Wasiirada cusub.
Gudoomiyuhu Baarlamaanka Somaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, ayaa Xildhibaanada ka codsanaaya in buuqa ay joojiyaan, isla-markaana ay codka u qaadaan codsiga Ra’iisal Wasaaraha, haddii la ansaxinaayo 10-ka maalmood ee uu codsaday iyo haddii loo diidi
Intaas kadib ayaa Xildhibaanada Baarlamaanka ee Kudlooyinka waxay buuq kala hortageen khudbadii Ra’iisul Wasaaraha, markii uu hadlay, isla markaana uu dalbaday in la siiyo 10-maalmood oo dheeraad ah.
“Ra’iisul Wasaaraha aan fasaxno, ajnadaha aan ka hadalno, buuqa aan joojino, hala aamuso, is dejiya”ayuu yiri Gudoomiyaha Baarlamaanka oo isagoo hadlayay ay qeylinayeen Xildhibaanada Baarlamaanka.
Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa markii dambe ka baxay hoolka, markii uu dhameystay khudbadiisa, iyadoo Xildhibaanada ay buuqayeen.
Ajandihii maanta ee kulanka Baarlamaanka wuxuu ahaa in codka kalsoonida loo qaado labaatanka Wasiiro, ee uu Ra’iisal Wasaaruhu soo magacaabay 27-kii bishaan. Ra’iisal Wasaaraha oo hortagey Baarlamaanka, ayaan hor keenin Golahiisa Wasiirada.
Lama oga go’aanka ugu dambeeya ay qaadan doonaan Xildhibaanada Baarlamanaka Soomaaliya, waxaana wali kala cadeen sida ay Xildhibaanada ay u taageersan yihiin xukuumada cusub ama uga soo horjeedaan.
DAAWO: WIIL DIGIL & MIRIFLE AH OO HADALKA U SAXAY JAAHILKA IYO WAX MA GARADKA LA YIRAAH “CABDI-GOOD”
NIN DHALINYARO AH OO KA SOO JEEDA GOBOLADA KOONFUR GALBEED OO U JAWAABEY WARIYE CABDIGOOD – DAAWO
War deg deg ah: DF oo joojisay shidaal baaris ka socotay Puntland iyo maamulkaas oo….
Maamulka Puntland ayaa aad uga carooday hadal kasoo baxay Shirkadda Baarista Shidaalka ee Red Emperor taasoo ku sheegtay in ay xirtay gabi ahaan xafiiskeedii Boosaaso ka dib markii ay sidaas amartay DF Somalia.
Shirkadaan oo fadhigeedu yahay dalka Austaralia ayaa waxa ay ku sheegtay warbixinta ay seddexdii biloodba soo saarto inay xirayso xafiiskeeda Boosoaso, shaqaalaha u shaqeeyana ay kala direyso kaddib markii Wasaaradda Tamarta ee dowladda Federaalku ay ku adkaysatay in heshiisyadu ay soo maraan wasaaradda.
Xiritaanka shirkadaan ayaa waxa ay ka danbeysay ka dib markii Wasiirkii Hore ee Wasaaradda Macdanta iyo Shadaalka, Da’ud Bisinle, uu ka sheegay shir ka dhacay London in barnaamijka ay wado shirkada Red Emperor uusan sharci eheyn.
Maamulka Puntland ayaan wali hadal kasoo saarin balse tani aya waxa ay dhibaato weyn u geesaneysaa maamulka uu hogaamiyo C/wali Gaas.
Qroshaha Maanta lala Damacsan yahay kalfadhiga Baarlamaanka, Xildhibaano fowda wada oo doonaya in Kalfadhiga uu dib u dhaco Maxaase Cusub?
Kadib markii Raysalwasare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke uu dib ula noqdey golihii wasiirada ee uu ku dhawaaqey 12 Janaayo, markii uu arkey in aysan taageero ka helayn Xildhibaanada Baarlamaanka, kuwaas oo sabab uga dhigey in ay ka buuxaan Wasiiradii xukuumad kastaa ka dhaqaaqi weydey, kuwaas oo qaarkood bilo ka hor shacabka hortiisa isugu casiley markii amnigu faraha ka baxay.
Raysalwasaare Cumar Cabdirashiid Sharmarke ayaa todobaadkan ku dhawaaqey 20 Wasiir, oo aan horey uga mid ahayn xukuumadihii soo marey dalka saddexdii sano ee u danbeysey, halka qaarkood aysan weligoodba ka mid noqon golaha wasiirada. Xubnahan oo u badnaa aqoonyahan iyo dhalinyaro u baahan in la tijaabiyo ayaa shacabka Soomaaliyeed siyaabo badan u soo dhaweeyeen, waxaana ugu horeysey waxyaabaha shacabku ku soo dhaweeyeen in la kala saarey Xukuumadda iyo Barlamaanka, maadaama Xildhibaanadui shaqo ka dhigteen in ay laba canleeyaan, markii ay qoonsadaan miiska golaha Wasiiradana waxay abaabulaan Mooshin ka dhan ah xukuumadda ay ka tirsanaayeen. Qodobka labaad ee shacabku ku soo dhaweeyeen ayaa ah in ay yihiin xubno aan horey uga mid ahayn xukumadihii khilaafku ragaadiyey, dhalinyaro ah isla markaana dalka xaaladiisa si fiican ula socda. Inkasta oo ay ku jiraan qaar ku eedaysan musuq-maasuq iyo kuwo hoggaanka sare ee damuljadiid ka mid ah.
Wararka Horseed Media soo gaaraya ayaa sheegaya in Xildhibaanada Baarlamaanku ay dalbnadeen in xukuumadda la horkeeno maalinta Sabitda ah ee beri kuna beegan 31 Janaayo 2014, Raysalwasaare Cumar Cabdirashiid ayaa warqad u qorey Baarlamaanka kana codsadey in xilliga ansixinta golaha wasiirada laga dhigo 7 Feberaayo 2014. Madaxweyne Xasan Shiikh MAxamuud ayaa si deg-deg ah ugu soo laabtey magaalada Muqdisho, waxaana caawa ka socda madaxtooyada Villa Somalia shirar iyo ol-ole lagu doonayo in xukuumadda aan Sabtida looga doodin Baarlamaanka.
Marka la eego Dastuurka Federaalka ma jiro qodob waajib kaga dhigaaya raysalwasaaraha in uu baarlamaanka horgeeyo Barnaamijkiisa maalinta ay u qabtaan, waxaana hadda socda waan-waan maalinta berri ah lagu baajinaayo in Xukuumadda la horgeeyo Baarlamaanka.
Xildhibaanada ku sugan Muqdisho ayaa la sheegayaa in ay hadda gaarayaan 200 ilaa 2010 Xildhibaan, waxaa dalka ka maqan ugu yaraan 60 Xildhibaan, kuwaas oo badankood taageersan Xukuumadda, Xukuumadda ayaa laga doonayaa in ay helaan 139 Xildhibaan oo taageera Barnaamijka Xukuumadda taas oo aan caddeyn in ay hadda helayaan.
Xildhibaanada oo aan weli quusan
Xildhibaanada federaalka ah ayaa u qaybsan saddex qaybood:
Xildhibaano madaxweynaha ku taageersanaa in meesha laga saaro raysalwasaare Cabdiweli Shiikh kuwaas oo badankood loo ballan qaadey in ay ka mid noqon doonaan Xukuumadda, ama ay talo ku yeelan doonaan dhismaha Xukuumadda oo cid ay keensadeen Wasiir looga dhigaayo.
Xildhibaano qorshahaas ka soo horjeedey, isla markaana raysalwasaaraha kula heshiiyey, haddii Mooshinka laga adkaado in Xukuumadda cusub ee uu soo dhisaayo ay ka mid noqdaan maadaama aan muddo 6 bilood ah wax mooshin ah laga keeni kareen, Xildhibaanadan waxaa qayb ka ah kuwo iyagu mucaarad isaga ah Madaxweyne Xasan Shiikh oo mucaaradnimadoodu shakhsi nacayb isaga dhisan tahay. Waxaa iyaduna jira Xildhibaano dan iyo heelo aan ka lahayn waxa socda, ganacsigga ay meesha u joogaana tixgeliya, waxaan la inkiri karin in ay jiraan qayb afaraad oo waddaniyiin ah dalka iyod adkaba daacad u ah kuwaas oo aad u tiro yar.
In badan oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ayaa aaminsan in Xildhibaanadu ay doonayaan in ay ku milmaan Xukuumadda, isla markaana qorshahoodu yahay in ay laba faras fuushan yihiin, waxaa taas xoojinaya markii xukuumadda dib loola laabtey, waxaa xafiiska raysalwasaaraha dalabkooda geystey 106 Xildhibaan oo cusub iyada oo xukuumaddii dib loola laabtey ay ka mid ahaayeen 37 Xildhibaan.
Dadka dhaliilsan Xildhibaaanada federaalka ayaa ku tilmaamey qorshaha Xildhibaanadu in uu yahay wax aan la fahmi karin, Waxay diideen Xukuumaddii hore oo ay ku lahaayeen 37 Xildhibaan, Golaha Wassiiradu maahan kuwo wada deeqa Xildhibaanada, haddii kuligood la siiyona waa isku qabsanayaan, haddii laga wada dhex-qaadeyna oo banaanka laga keeneyWasiirada, dood kale oo ay xukumadda ku ridayaan ayey keeneen.
Xildhibaanada Kutlooyinka ah ayaa ka xishoodey in ay xukuumaddan Xildhibaanada laga barax yeelay ay si toos ah uga horyimaadaan, waxaana ay bilaabeen qorshe kale oo ay dhulka ku dhigayaan. Horseed media ayaa ogaatey in Xildhibaanadu ay wadaan in xukuumaddan aan kalsooni la siin karin maadaama ay tahay Xukuumad khilaafsan Dastuurka oo aan dhamaystirneyn, maadaama dastuurku dhigaayo in Xukuumaddu ka kooban tahay Wasiiro, Wasiir-kuxigeeno iyo Wasiiru Dowlayaal, sidaas darteedna ay qodobkaasba u cuskanayaan maalinta Berri ah.
Xildhibaano badan ayaa doonaya in raysalwasaraha fursad loo siiyo 7 maalmood ee uu qabsadey, kuwaas oo rajo ka qaba in ay noqdaan, Wasiiru Dowlayaal iyo Wasiiro kuxigeeno.
Waxaa soo baxaya wixii horey looga digaayey, kadib markii Madaxweyne Xasan Shiikh uu diidey in la xaliyo khilaafkii isaga iyo raysalwasaare Cabdiweli Shiikh, kuna adkeystey in Baarlamaanka lagu kala baxo, waxaana hadda khilaafkaas uga baxay qiime aad u badan, muddo 4 bilood ah waxaa xaniban dhamaan hawlihii Dowladda, waxaana la ogeyn halka ay ku danbeyn.
Ugu danbeyntii waxaa dhici karta in Xildhibaanada Baarlasmaanku ay dhegaha ka furyestaan dalabka ah in xukuumadda loo keenayo 7 Febaraayo oo ay Xukuumad aan la horkeenmin codka u qaadaan maalinta berri ah ee Sabtida, taas oo si fiican shafka dhulka ugu dhigeysa Dowladda Federaalka.
FADEEXO:-Xildhibaano Xoog ku Jabsaday Xafiiska JAWAARI Xili uu la Shirayay RW CC & Cumar oo la Cid uu aamino.
Janaayo 30, 2015
WAAJIDPRESS – 30 Jan 2015:
dirashiid ayaa waxa uu weli walaac ka muujinayaa wajiyada kala duwan ee uu kala kulmaayo Xildhibaanada Baarlamaanka oo iyagu u mindiyo tumanaayo qaabkii ay ku fashilin lahaayen Xukuumada labaad.
Cumar ayaa waxa uu ku jahwareersan yahay Siyaasadaha marba is jaan rogaayo, isagoona soo dhaweyn wanaagsan ka waayay Xildhibaanadii uu garabsan lahaa kadib markii badi ay raaceen doontii ay saarnaayen garabka is baheystay.
Dhanka kale Qaar ka mida xildhibaannada Baarlamaanka ayaa galabta maqrib ku dhowaadkii si xoog ah ku jabsaday xafiis ay ku shirayeen Ra’iisal wasaare Cumar C/rashiid iyo guddoonka Baarlamaanka oo ka kooban Guddoomiye Maxamed Sheekh Cusmaan iyo Labadiisa ku xigeen Jelaani Nuur Iikar iyo Mahad Cawad kadib markii shirkaasi waqti dheer qaatay.
Xildhibaanada oo careysnaa iyo madaxdii shirka ku jirtay ayaa dood kulul dhex martay, waxaana arrinta qaboojiyay guddoonka Baarlamaanka oo xildhibaanada ka codsaday inay is dejiyaan oo beri la keenayo xukuumada sidii la isku ogaa.
Guddoomiye ku xigeenka Baarlamaanka Mahad Cawad ayaa arrintaas soo jeediyay kadib markii uu Guddoomiye Jawaari u baxay soo dhoweynta Madaxweynaha.
War deg deg ah: R/W Cumar C/rashiid oo waqti dheeraad ah ka codsaday guddoonka BF
Ra’iisal wasaaraha xukuumada Soomaaliya ayaa waqti dheeraad ah ka codsaday Guddoonka Baarlamaanka si uu usoo dhameystiro xukuumadiisa oo hadda ay magacaaban yihiin 20 wasiir oo kaliya, una diyaariyo qorshihii uu horkeeni lahaa Baarlamaanka.
Ra’iisal wasaaraha oo ay is-arkeen GuddoomIyaha Baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa, ayaa waxa uusi rasmi ah uga codsaday in la siiyo muddo toddobaad ah ilaa khamiista danbe 5-da February.
Guddoonka Baarlamaanka ayaa u sheegay in codsigaas aanu shaqeyn karin mar haddii Baarlamaanku u codeeyay in Sabtida 31-ka Janaayo codka kalsoonida loo qaado xukuumada cusub. Waxayna Ra’iisal wasaaraha kula taliyeen inuu isaga laf ahaantiisa tago baaralmaanka oo codsigiisa u jeediyo.
Sidoo kale waxaa shirkaasi ku biiray xildhibaano badan oo ka socday kutlooyinka isbaheystay waxayna dood dheer oo siyaasadeed kadib lagu guuleysan waayay in wax go’aan ah laga siiyo Ra’iisal wasaaraha codsigiisa.
TAARIIKHDA WASIIRKA CUSUB EE WASAARADA MAALIYADA IYO LACAGTA
Janaayo 29, 2015
WAAJIDPRESS – 29 JAN 2015:
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Muqdisho Dr. Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa Wasaarada Maaliyadda u magacaabay Muwaaadin kasoo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya, Dr. Maxamed Aadan Ibraahim (Farkeeti).
Dr. Maxamed Aadan Ibrahim Farkeeti ayaa ah shakhsi lagu yaqaan waxqabad iyo karti dheeraad ah waxaana lagu tiriyaa inuu yahay aqoonyahan degan oo Akhiyaar ah.
Dr. Maxamed Farkeeti wuxuu sannadkii 1964-tii ku dhashay Magaalada Baydhaba Janaay, isagoo Dugsigii Hoose, Dhexe iyo Sare kaga baxay Magaalada Baydhaba.
Wuxuu Maxamed Farkeeti waxbarashadiisa Jaamacadeed kusoo qaatay Wadanka Malaysiya, wuxuuna Shahaadada Bacehlor Degree ku qaatey Cilmiga Maamulka iyo Maareynta oo ah (Business Administration) wuxuuna Shahaadada Master-ka (MBA) ka qaatey Wadanka Ingiriiska – Wuxuuna ku qaatey “MASTER DEGREE IN FINANCE”.
Dr. Farkeeti wuxuu xubin ka ahaa Gudigii Farsamada ee xulitaanka Baarlamaanka (TSC) iyo Ergadii ansaxisay Dastuurka Federaalka Soomaaliya.
Sannadkii 2014-kii ayaa loo magacaabay Wasiirkii Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee lixda Gobol ee uu hadda hogaamiyo Madaxweyne Dr. Madoobe nuunow Maxamed.
Inkasta oo Dr. Maxamed Aadan Ibraahim (Farkeeti) soo qabtay Shaqooyin badan oo kala duwan, hadana waxaa iminka loo magacaabay Jagada Wasaarada Maaliyadda oo uu ku haboon yahay , Wuxuuna ka soo jeeda Beelweynta Digil & Mirifle wuxuuna ka sii yaha Qabiilka DISOW.
Wasiirka Maaliyada iyo Lacagta Dr. Maxamed Aadan (Farkeeti) waa nin Sumcad ku leh Beesha Caalamka, Albaab kastana si fudud u garaaci kara, waa haddii Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ay Ansixiyaan – Hoos ka daawo Sawiradiisa:
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Janaayo, 2015.